Myanmar Daily Mail: ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ နောက်ဆုံးပန်းတိုင် ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဆိုတာမရှိလို့လူဝင်မှု/ချုပ် ဦးမောင်မောင်သန်းပြော ၊ BBC ဘီဘီစီ သတင်းဌာန၏ လိမ်ညာမူအား ပြန်လည်တောင်းပန်ရန် ဒါရိုက်တာချိုတူးဇော် သတိပေး ၊ BBC သတင်းဌာနရဲ့ ရိုဟင်ဂျာလိမ်ညာမှုအပေါ်မခံနိုင်တဲ့
အကြောင်းအရာတစ်ခု၊ Issueတစ်ခုကို သုံးသပ်တဲ့အခါမှာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (analytically) ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာနဲ့ တိုင်းရင်းသား အရေးဆိုတာ မတူပါဘူး။ နိုင်ငံသားဖြစ်တာနဲ့ တိုင်းဦးသားဖြစ်တာနဲ့ မတူပါဘူး။ ခွဲခြားသိတတ်ရပါမယ်။ BBC သတင်းဌာနက Anna Jones ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ သတင်းသမားတစ်ယောက်မှာ ရှိရမယ့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပဲ ညံ့ဖျင်းတာလား၊ အချက်အလက် စုဆောင်းဖို့ ပျင်းတာလားတော့ မသိဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ မြေပုံကို သောက်တလွဲ ဆော်ထည့်လိုက်ပါပြီ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဘင်္ဂလီပြည်နယ် လုပ်ချလိုက်ပါပြီ။ အဲဒီမြေပုံကို ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ရလာလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော် နှစ်နှစ်လောက်က ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဂျပန်က မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ပြောပြဖူးတယ်။ "ဟဲ့ကောင် ရခိုင်ပြည် ကုလားပြည်ဖြစ်သွားပြီတဲ့"။ ကျနော်က... ဟာ ဘာလို့ ဖြစ်ရမှာလဲပေါ့.. နောက်မှ သူက ရိုဟင်ရျာအမည်ခံ ဘင်္ဂလီစာစောင်တစ်ခုမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ နေရာမှာ သူတို့ လူမျိုးတွေနဲ့ အစားထိုးထားတာတဲ့။ ကဲ.. ကောင်းကြသေးရဲ့လား.. အရပ်ကတို့ရေ။ ဒီဖြစ်ရပ်နှစ်ခု ဆက်စပ်နေတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
အဲဒီလိုပဲ တခြား နောက်ပေါက်လာတဲ့ မိုဟာမက် ခါလင်မ် (ခ) ကိုကိုလင်း လို အကြမ်းဖက်သမား hacker တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅ ၀န်းကျင်တုန်းက ရခိုင်အီးမေးလ်အုပ်စုတွေကို ခိုးဝင်ပြီး စော်ကားတဲ့အကောင်ပါ။ ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို "အရမ်းမိုက်တဲ့ ခွေးတွေ"ပဲလို့ လူသိရှင်ကြား စော်ကားထားတဲ့ကောင်ပါ။ အခုဆိုရင် ARU ရဲ့အဓိက လူတစ်ယောက်ပေါ့။
BBC ဘီဘီစီ သတင်းဌာန၏ လိမ်ညာမူအား ပြန်လည်တောင်းပန်ရန် ဒါရိုက်တာချိုတူးဇော် သတိပေး
ဘီဘီစီ သတင်းဌာန၏ ထုံးစံအတိုင်း မြန်မာတိုင်းရင်သားများအား သွေးထိုးလူံ့ ဆော်နေခဲ့သည်မှာ ပြည်သူအားလုံးသိကြပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များတွင်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရက သတင်းစာများတွင် အောက်ပါအတိုင်းကြေငြာထားသည်။
ယခုအခါ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်တွင် အဆိုပါ ရေးသားမူများကိုရပ်ဆိုင်းပစ်ခဲ့သည်။
ယခုဖြစ်စဉ်မှာ ဘီဘီစီ သတင်းဌာနက အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော မြန်မာတိုင်းရင်း
သားများ အကြောင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာမြေပေါ်တွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ ရှိခဲ့သော်လည်း
ကမ္ဘာမြေစတည်ကတဲက ရိုဟင်ဂျာ- ဟူသောလူမျိုးမရှိခဲ့ပေ။ သို့ သော် ဘီဘီစီ သတင်းဌာနက
ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သွတ်သွင်းကား မြေပုံနှင့်တကွ လုပ်ကြံလီဆယ်ပြီး
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ကမ္ဘာသိအောင်ဖေါ်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ( တနည်း ) မြန်မာလူမျိုးတို့ ၏
သမိုင်းအမှန်ကို တိတိကျကျမသိသော ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် လိမ်လည်ဖေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘီဘီစီ -အ၈င်္လိပ်ဘာသာဖြင့် လိမ်ညာမူကို ဒီနေရာတွင်တိုက်၇ိုက်ဖတ်ရူနိုင်ပါသည် ။
မြေပုံနှင့်တကွ လူမျိုးပါဖျက်ဆီးလိုက်သော ဘီဘီစီ၏ အမျိုးဖျက်လုပ်ရပ်သက်သေ
ဘီဘီစီ၏ အဆိုပါလိမ်လည်မူအား ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင်ရှိသော မြန်မာတမျိုးသားလုံးက ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။ အဝေးရောက် ဒီမိုကရေစီလူပ်၇ှားသူများလည်း အဆိုပါလိမ်လည်မူအား ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဘီဘီစီ၏ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာတွင် ပြန်လည်တောင်းပန်ရန် ပြောဆိုကြပါသည်။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ ၏ သမိုင်းအမှန်ကို ဖျက်ဆိးလိုက်သော ဘီဘီစီ သတင်းဌာနအနေဖြင့်
(တပတ်အတွင်း) တရားဝင်တောင်းပန်ရမည် ။မတောင်းပန်ပါက မိမိကိုယ်တိုင်း ဦးဆောင်လူပ်ရှားမည်ဟု ဒါရိုက်တာ၊စာရေးဆရာ ချိုတူးဇော်က သတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာ ချိုတူးဇော်သည်
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း တဦးဖြစ်ပြီး ၊မျိုးချစ်စိတ် ။နိုင်ငံချစ်စိတ် ၊ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ တယောက်ဖြစ်ပါသည်။ 2010 မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲ ပါတီများဖွဲ့ စည်းရာတွင် ခွပ်ဒေါင်းအလံကို ပါတီအလံအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းအား ဦးဆောင်ကန့် ကွက်ပယ်ချခဲ့သူမှာ ဒါရိုက်တာ ချိုတူးဇော်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါရိုက်တာချိုတူးဇော်၏ ဖေ့စ်ဘုတ်စာများနှာမှာ - http://www.facebook.com/chotuzaw?ref=ts
ဘီဘီစီသတင်းဌာန၏ ဖေ့ဘုတ်စာများနှာတွင် - https://www.facebook.com/bbcburmese?ref=ts
တိုင်းရင်သားများ၏ ကန့် ကွက်ပြောဆိုသံများကို ဖတ်ရူနိုင်ပါသည်။
မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းက ပြည်သူချစ်သောဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦး အစီအစဉ်ကို လေလိူင်းပေါ်တွင် ပြောကြားရာ…. မြန်မာလူမျိုးများတွင် ရိုဟင်ဂျာ လုံးဝမပါဝင်ကြောင်း ၊ ဘင်္ဂလာဒေရ်ှမှ ခိုးဝင်လာသော ဘင်္ဂလီလူမျိူးများသာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြာခဲ့ပါသည်။ NLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဌ (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း) ဦးတင်ဦး၏ ပြောကြားချက်ကို .. ကန့် ကွက်ခဲ့သူမှာ အမေရိကန် နိုင်ငံရောက် ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ မြန်မာစကားမတတ်သော ဘင်္ဂလီခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ ဘင်္ဂလာလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ၊ ဘင်္ဂလားဘာသာစကားပြောဆိုသော မူဆလိမ်ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည်။မြန်မာနိုင်ငံသည် လူဦးရေ သန်း ၆၀ ကျော်သာရှိသော်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်အကျယ်ခန့် သာ ရှိသော ဘင်္ဂလားရှေ့ နိုင်ငံတွင် လူဦးရေ သန်း ၂၀၀ ကျော်ရှိနေသည်။ ဘင်္ဂလီများ၏ နေစရာ၇ှားပါးမူကြောင့် မြန်မာပြည်ထဲသို့ခိုးဝင်လာရာမှ ရိုဟင်ဂျာပြသနာဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာအရေးသည် လူမျိုးရေးအသွင်ဆောင်သော်လည်း နိုင်ငံရေးလုပ်စားသူများ၏ စားကျက်ကွင်းတခုဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံထဲမှ မူဆလိမ်ဘာသာဝင်များသည် ရိုဟင်ဂျာ အခွင့်ရေးအမည်ခံကာ ကုလသမ္မဂ္ဂ မဟာမင်းကြီးရုံးတွင် ဒုက္ခသည်အမည်ခံ၍ ဥရောအပနိုင်ငံများသို့ပြောင်းရွှေံ နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါအပြင် အာရပ်ကမ္ဘာမှ မူဆလိမ်စော်ဘွားများ၏ ဘာသာရေးထောက်ပံ့ငွေများ ၊ဒုက္ခသည်ထောက်ပံငွေများဖြင့် ဆွေစဉ်မျိုးဆက် လုပ်စားနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၄င်းဘင်္ဂလီတို့ သည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ ၏ သမိုင်းအမှန်ကို ဖျောက်ကာ ရိုဟင်ဂျာဟု လိမ်ညာနေခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါလိမ်ညာမူကို ဘီဘီစီ သတင်းဌာနနှင့် အပေးအယူလုပ်ကာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ကမ္ဘာကိုလိမ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသသည်။
မြန်မာတိုင်းရင်သား ၁၃၅ မျိုးသည် ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် စိတ်ဝမ်းကွဲချင်ကွဲမည်။ ပါတီနိုင်ငံရေးကြောင့် အယူအဆကွဲလွဲချင် ကွဲလွဲမည်။ သို့ သော် တိုင်းရင်းသားတို့ ၏ သမိုင်းအစစ်အမှန်ကို ထိပါးစော်ကားလျှင် လုံးဝခွင့်လွတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အရေးကြီးလျှင် သွေးနီးကြမည်ဆိုသည့်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းသားအားလုံးနှင့် ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီလူပ်ရှားသူများအားလုံးက
BBC သတင်းဌာနရဲ့ ရိုဟင်ဂျာလိမ်ညာမှုအပေါ်မခံနိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ တုန့်ပြန်မှုများ
ပြည်ပ သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BBC ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ခေါ် ဘင်္ဂလီတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်ဆက်သွားတဲ့ သတင်းအပေါ် ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ BBC ဟာ မလိမ့်တပတ်နဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် လိမ်ညာလှည့်ဖျားဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့လည်း BBC ရဲ့လိမ်လည် လှည့်ဖျားတတ်တဲ့ အကျင့်ကို သိနေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ BBC အပေါ်မှာ ယုံကြည်မှု မရှိဘဲ ပြန်လည် တုန့်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ BBC ရဲ့ လိမ်လည်မှုနဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ BBC အပေါ်တုန့်ပြန့်မှု comment တွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ BBC လိမ်နေသည်၊ ညာနေသည် ဆိုတာ တကယ်ဟုတ်မဟုတ် စာဖတ်သူတို့ ကြည့်ရှု ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ကြပါလို့ ရွှေမြန်မာမှ တိုက်တွန်း လိုက်ရပါတယ်။
မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာမပါတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအစား
မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကြောင့် ပုံပြောင်းလိုက်ပုံ
BBC ရဲ့ လိမ်ညာမှုကို ပြန်တောင်းခံခိုင်းတဲ့ မြန်မာပြည်သားတစ်ယောက်တင်ထားတဲ့ပုံ
BBC ရဲ့လိမ်ညာမှုတွေကို မခံနိုင်တော့တဲ့
ရခိုင် တွေရဲ့ BBC အပေါ် ဆန့်ကျင်ဟန်
လိမ်ညာမှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ BBC ကို မီးရှို့ခိုင်းနေကြပါပြီ..
ဆန္ဒမဲ အရ BBC တော့ မဲရှုံးရှာပြီ
ဘယ်လောက်တောင် BBC ရဲ့လိမ်ညာမှုတွေကို ခံပြင်းနေလဲမသိ
BBC တော့ နေရာတကာကြက်ခြေခတ်တွေပဲ...
မျိုးချစ်မြန်မာပြည်သားတစ်ယောက်ကတော့ BBC ဆိုတာ ဒါပါတဲ့
သမိုင်းကို လိမ်ညာဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့လည်း အမှန်တရားကို
သိတဲ့လူတွေက မယုံကြဘူး BBC
ပုံကရိုင်းတယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ ဝေဖန်သူတစ်ယောက်ကတော့
BBC လုပ်ရပ်တွေက ဒီ့ထက်မက ထိုက်တန်တယ်တဲ့...
လိမ်ညာမှု သတင်းအတွက် မြန်မာပြည်သားတွေမှ တောင်းပန်ခိုင်းသော်လည်း
မထင်မရှားဤသို့ BBC မှ ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့သည်
BBC သတင်းဌာအပေါ် ဒီလို မြန်မာပြည်သူတွေ ဝေဖန်ပြောဆို ရှုံ့ချခဲ့ကြတယ်။
We never heard and learn about Rohingyas are same as Rakhines. I am so disappointed on it.Bullshit BBC. Let's go and fight to all of BBC networks. We must protect our land.
Rohingya & Arakan are too different races. Rohingya is muslim, bengali. they stay beside the road by the camps. they don't have own land. even they are bengali, bengaladish government don't accept them. Arakan isabuddhism, myanmar. there are not rohingya in rakhine state. we know BBC isabig broadcasting company. why they made so dangerous mistake like that, we couldn't understand. How can we believe them? they should consider that case. we need apology for their mistake.
မသန့်စင်ဘူး ဒီဌာနက ၊ အကျင့်ဆိုးတွေ ရှိနေတာပဲ ၊
ဘယ်လိုများရပ်တည်နေပါလိမ့် BBC ရယ် ......
คน รัก แท้ๆๆ
ဘီဘီစီ မြန်မာအသံလှိုင်းကလူတွေဘယ်သွားသေကုန်ပြီလဲ ပြောတော့မျိုးချစ်မြန်မာနိုင်ငံကောင်းစားရေကိုရှေးရှုနေပါတယ်ဆို အခုကဘာလဲ သေကုန်ပြီလားမပြောတော့ဘူးလား =ီးဆို့နေလို့လား
ဒီလောက်ဆို..ရှက်သင့်ပါပြီ BBC ရယ်
Thiri Yadana Kyaw
Hey bel kg tone kwa....sout Ka Larr tway ko..ngar tot precious myanmar htae ko htae tar.......hta minn wa aung sarr htarr kya naw....a pyin mhar tway lo ka tot.....ash ma phyit ma chinn.....gun nae shot pyit mel
Si Thu M H
Felix Phyo Wai Thaw
မင်းဒီ ဘင်္ဂလီတွေကိုတိုင်းရင်းသားလုပ်တဲ့ကိစ္စ သမိုင်းအကိုးအကားနဲ့ရှိရင်လဲ သေချာရှင်းပြလိုက်စမ်းပါ BBC
မသေချာပဲတင်ထားတယ်ဆိုလဲ အမှားကို ဝန်ခံလိုက်ပါ။
ပုန်းမနေစမ်းပါနဲ့...အမှန်တွေရေးလိုက်ရလို့ စားခွက်ပျောက် သွားခဲ့ရင် ငါတို့ပြည်က ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ အလှူတွေမှာ တက်စားစမ်းပါ.. .ပိုသိက္ခာရှိပါတယ
အလောင်း စည် သူ မြေမြိုလို လူမကုန်၊လူမြိုလို့ လူကုန်တယ်ဆိုတာ ဒီသတင်းမျိုးတွေ့ကြောင့်ပါ။ သတင်းဆရာများခင်ဗျား ကိုယ့်ကြောင့် လူမျိုးဂုဏ်မတက်ရင်နေ၊ကိုယ့်ကြောင့် လူမျိုးပျောက်မဲ့လုပ်မျိုး နောက်မလုပ်ပါနဲ့လို့ အထူးမေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
Why did u attach the rohingya,bengali's photo on the arakan map? If u don't know, look at the myanmar nationalities' map. arakan is not rohingya. arakan is myanmar. Myanmar is not including rohingya. why did u commit stupid mistake? if u understand what we mean,remove that photo from the map. than, u must makeapresentation for your mistake. And, u should apologize to us if you all are human being.
တော်တော်မိုက်ရိုင်းတဲ့ ကောင်တွေ။ မင်းတို့ အယင်ကလုပ်ထားတာတွေအားလုံးအလကားဘဲ။ ပိုက်ဆံရတိုင်း ဟစ်နေတာ။ မင်းတို့လဲ ဘဂါင်္လီ လူမျိုးဘ၀ပြောင်းကြတော့။ မြန်မာပြည်မှာ ကြီးပြီး မြန်မာလူမျိုး ဖျက်တဲ့ ခွေးတွေ။
BBCမှာအလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာများ ယခုပုံကိုပြန်ကြည့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်မွေးခဲ့သောကျေးဇူးတရားကိုပြန်အောက်မေ့ကြပါ ၊တစုံတရာကိုပြောပြချင်ဇောနဲ့ အသိ သတိများမလွတ်စေချင်ပါ ---
David Man Dalar
BBC ကလူတွေ ဘာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်နေရာမှာ ရခိုင်လူမျိုးပုံကိုမထည့်ပဲ ဘင်္ဂလားသားတွေပုံကိုထည့်တာလဲ၊ ခင်ဗျားတို့ ပြန်လည်ရှင်းလင်းပေးပါ၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူးမျိုးအားလုံးထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမပါတာခင်ဗျားတို့သိမှာပါ၊
Ñaing Myo Õo
မြန်မာတွေက ကုလားတွေတွေဆိုပြီး ဘာသာရေးခွဲခြား လူမျိုးရေးခွဲခြားပြီး လိုက်ရိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်လာမယ့် မျိုးဆက်သစ်အတွက် ကာကွယ်နေတာ human rightsဆိုတာလစ်မစ် ရှိတယ်
BBC World Service မှာ သွားပြောပါ ပြောသမျှဖျက်နေရရင် သူတို့အလုပ်ရှုပ်ပါတယ် fb မှာ မြန်မာတွေ အများကြီးရှိပါတယ် သူဘယ်လောက် ထိ ထိုင်စောင့်ပြီး လုပ်နိုင်မှာမို့လဲ လူတစ်ထောင်တင်ရင် လူတစ်ထောင်စာ ဖျက်ရမှာပါ သူတို့ အဲလောက်အချိန်ပေးနေရရင်ကို အနည်းဆုံး စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်
ကဲ ... BBC ရေ ဖြေရှင်းချက် တောင်းဆိုနေသူတွေလဲ မနဲတော့ဘူး၊ ဒီအတိုင်းပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေတော့မှာလား၊ တခုခုတော့ လုပ်ဖို့ လိုပြီထင်တယ်။
ခု ပြောနေကြတာ ရခိုင် တွေပဲလို့မထင်နဲ့ .. တစ်မျိုး သား လုံး တစ်မြေထဲဖွါး တိုင်းရင်းသား အားလုံးက လုံးဝ လက်မခံဘူး..။ ညောင်းရင် ရပ်သွားလိမ့်မယ် မြန်မာတွေ ကောက် ရိုးမီးလို့ မထင်နဲ့ ..။
Coya Marma လုံးဝထောက်ခံတယ် အခုဘီဘီစီက တိုင်ရင်းသားတွေကို ကုလားနန့်ရန်တိုက်ပေးနေတယ် ကုလားကိုထောက်ခံ၇င် သက်သေလေးဘာလေးပြစမ်းပါခင်ဗျာ သိချင်လို့ပါ
ချင်းပြည်နယ်ကိုပြတဲ့နေရာမှာလည်း နာဂကြီးတယောက်ပုံထည့်ထားတာတွေ့ ရပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်လုပ်ကြံမှုလို့ မြင်တယ်။ ပြင်းထန်စွာကန့် ကွက်ပါတယ်။
အိမ်ငှားနဲ့ အိမ်ရှင် မတူပါဘူးခင်ဗျာ ။ မြန်မာလူမျိုး ဘီဘီစီဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ တာဝန်ကျေသင့်တယ်ထင်ပါတယ် ။ Serious issue ပါ ။ လူ.အခွင့်အရေးကိုလေးစားပါတယ် ။ လူမျိုးရေးပြဿနာတော့ မဖန်တီးပါနဲ့ဗျာ ။ ကျေးဇူးပါ ။
i repeat bcoz BBC Deleted my post ,
ကမ်းပြိုရင် ဗဟိုလည်း ယိုင်နဲ့လာမှာပဲ။ ကမ်းပါးကို မပြိုပြိုအောင် တူးဖြိုသလို လုပ်နေတဲ့ BBC ရဲ့လုပ်ရပ်ကို လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါ။
ဘီဘီစီ အမှားကြီးကို တင်ပြတာ အရမ်းရှက် ဖို့ ကောင်းပါတယ် .ပြန်တောင်းပန်ပါ
အလောင်း စည် သူ ပြည်ထောင်စုဖွား ရိုဟင်ဂျာ ဆိုလို ဘယ်မြန်မာ့သမိုင်းစာအုပ်မှ မတွေ့ရတဲ့ လူမျိုးကို ရခိုင်ပြည်နယ် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးပုံရိပ်တင်ထားတဲ့ ဘီဘီလိမ် အင် ဘီဘီစီ မှမြန်မာလူကြီးမင်းများခင်ဗျား။ပြည်ပြေးလို အားမရသေးလို ပြည်ကိုပါရောင်းစားချင်သေးလားခင်ဗျား
မင်းတို့မျိုထားကြလို့အသံမထွက်ကြဘူး ဘယ်လောက်တောင်မှ ရထားလဲ ဘီဘီစီဝိုင်းတော်သားများ မင်းတို့ကချီးထုတ်ကောင်တွေဖြစ်နေပြီသိရဲ့လား ဘာတွေလာပြောပြော မင်းတို့ပြောတာတွေကို ယုံနေမလားလို့ထင်လား မီဒီယာ လောကတဲ့ မင်းတို့ကို မပြုတ်ပြုတ်အောင်ကို တိုက်မယ်။မင...်းတို့ကောင်တွေ လူပါးဝတာသိပ်များနေပြီ။ပြည်သူတွေကို မင်းတို့အဲလိုပဲဆက်ဆံရလား မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကို မျိုးဖြုတ်တဲ့ဘီဘီစီ မင်းတို့ တစ်နေ့ကြရင် ထိုကုလားတွေခိုင်းတဲ့နွားတွေဖြစ်မှာသေချာတယ် အဲဒီချိန်ကြမှ နောင်တမရစေနဲ့ ဘီဘီစီ.....
why BBC Team delete comments and posts shame on BBC . what is the freedom talk ? can we blame on yours mistake ? when BBC public that was mistake and apologise for it , we will stop blame on BBC . come on . go for it !
ဦး စစ်မင်း ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိဘူး..။ ဒုက္ခရောက်လို့မြန်မာမဟုတ်တဲံ ပြည်ပ က လူတွေပဲရှိတယ်..။ ဒါကို များ ဘာလို့ ရိုဟင်ဂျာ .. ရိုဟင်ဂျာ ... ခနခန ထပ်အောင်ပြောနေပါသလဲ ..။ မရှိတာ ကို အရှိလိုမျိုး ပြောနေခြင်းကို မနှစ်မြို့ မှာ ..။ ဒီနေ့သတင်းဟာ မနက်ဖြန်အတွက်သမိုင်းဆိုသလို.. စွယ်စုံကျမ်းမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ ၃ မျက်နှာစာ.. ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေဟာ အခုချိန်မှာ သူတို့ အတွက် ထောက်ပြစရာသမိုင်းဖြစ်နေပြီ..။ ဒီသတင်းဟာ လဲ နောက်တစ်ချိန်မှာ ထောက်ပြစရာ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာကြီးကို ကမ္ဘာသိ မီဒီယာ ကတောင် ကြေငြာ ခဲ့ပါသည် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာမှာ မလွဲဘူးလို့ ယူဆရပါသည်..။
ဒါကြောင့် .. ဖြေရှင်းယုံမျှ ဖြင့် အားမရပါ..။ ဆောင်းပါး အား မပယ်ဖျက်လိုလျှင်လဲ... ရိုဟင်ဂျာ အစား မြန်မာမဟုတ်သော ပြည်ပမှ ခိုလှုံလာသူများ စသဖြင့် သုံးနှုန်း ပြင်ဆင်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါသည်..။ ထို့အတူ ဖော်ပြပါ မြေပုံ ကိုတွင်လဲ ရိုဟင်ဂျာ အစား အမည်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပေးစေလိုပါသည်..။
Kyaw H. Aung Dear BBC,
However, response from facebook is not official. You propagate false map on your website; not on facebook. When something is on the internet, it is hard to get rid of it. Your map will be used by Bengalis (so called Rohingya) against Burmese in the future.
Therefore, we strongly demand to releaseastatement with BBC Letterhead. We also demand apology from Anna Jones....
YinYin WinOo Right !!! BBC can't get away from this mistake as nothing you did was wrong ... BBC should apologise for this big mistake you owe to Myanmar and Rakhine publicly on air (Myanmar / Eng ) both and also on the page in both languages too
Anti-BBC Anti-BBC ကမ်ပိန်း စာမျက်နှာကွာ။ မတောင်းပန်မခြင်း မဖြုတ်ဘူး။ http://www.facebook.com/pages/Anti-BBC/219295628136855?sk=wall
Thwaythit Sar BBC က တဖြည်းဖြည်း ရိုဟင်ဂျာကို မြန်မာနိုင်ငံထဲကို သွင်းနေတာ.. မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့... တန်းတူဖော်ပြပြီးမှ လျှောက်ပြောနေတာ... ဘာမှ မဆိုင်ဘူး... :(
Ma Hla ဘုရားကပြောထားတယ်မလား မျက်စိနဲ့မြင်တာတောင် တစ်ဝက်ပဲယုံတဲ့ BBC ပြောတာကို တစ်သက်လုံးမယုံတော့ဘူး Anna Jones ကိုယ်တိုင် သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ပြောခိုင်းကြည့်ပါလား...
သစ်လွင် မျိုးဆက် အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ စာအသွားအလာ ကို ကြည့်ပါ။ ရှင်းပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကို ဗမာက လက်မခံလို့ပါတဲ့။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကလည်း ဘာလို့ လက်မခံလည်း..ထွက်ပြေးတယ်လို့သာဆိုနေကြတာ..ဘာလို့ လက်မခံလည်း ဆိုတာ Neutrally မရေးထားဘူး။ အရောင်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် မရိုးသားဘူး။ေ၇းချင်ရာရေးထားပြီးမှ ဒါမျိုးလုပ်နေသေးတာ လုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူး။
Phyu Pyar Shame on you! အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကိုဖျက်တာမကောင်းပါ။ မြန်မာအမျိုးကောင်းသမီးတွေ ဘဝပျက်တာ ဒီလို မီဒီယာတွေ မမှန်မကန်ထောက်င်္ခနေလို့ပေါ့။S - SHAME ON YOU BBC & ANNA JONES.e first place.
သူ့ဆန်စားထားတော့လဲရဲထားပေါ့BBC ကမြန်မာစကားပြောတတ်၊မြန်မာစာနားလည်၊မြန်မာ နာမည်ပေးထား တဲ့လူတွေရာ. (ခင်ဗျားတို့..မြန်မာနိုင်ငံသား ဟုတ်သေးလား မဟုတ်သေးလားတော့မသိဘူး..တို့မြန်မာ လူမျိုး တွေကွလို့တော့ပြော ရမှာ..အတော်ဝန်လေးသွားပီ)
April Thinn Naing
နောင်အနာဂတ်မှာ မလေးရှား အင်ဒိုနီးရှားတို့လို
အထက်ပါ comment နှင့် ဓါတ်ပုံများကို BBC Facebook စာမျက်နှာ မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ BBC သည် ဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည် မှ သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း comment ရေးသူ၏ တချို့ comment တွေကို ဖျက်ပစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထက်ပါ comment များထဲမှာ တချို့ကို မတွေ့တော့လျှင် BBC သတင်းဌာန၏ ယုတ်မာမှုသာ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
BBC Facebook စာမျက်နှာ ဒီနေရာ တွင် သွားရောက်၍ BBC ၏ လိမ်ညာမှုအပေါ် ဝေဖန်ရှုံချထားသော မျိုးချစ်မြန်မာများ၏ ဝေဖန်မှု များကို အပြည့်အစုံတွေ့ရပါလိမ့်မည်။
ရိုဟင်ဂျာသည်မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်သည်၊၊ BBC သည်ဘက်မလိုက်ဘဲမှန်မှန်ကန်ကန် တင်ပြပေးနေသော သတင်းဌါနတစ်ခုသာဖြစ်သည်၊မည်သူ့ကိုသာစေ၊နာစေ သဘောမထားပါ၊BBCသည်ဗုဒွ့မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသော ဘင်္ဂလီဗုဒွ့ကုလားရခိုင်တုတွေထောက်ပံ့ထားငွေကြေး ဖြင့်ထူထောင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာမြန်မာတိုင်းရင်းသား လို့မင်းကိုဘယ်သူကပြောလည်းစောက်ရူးရဲ့သူများနိုင်ငံမှာနေပီးအေးအေးဆေးဆေးနေစမ်းပါ။commant တွေဟိုရေးဒီရေးနဲ့ဖင်လိုက်ယားမနေနဲ့ ကြည့်နေတာကြာပီ....ငါတို့နိုင်ငံမှာလာနေရင်လဲကိုယ့်ဟာကိုယ် ဝဝစား..ဝေးဝေးနေ..ဝင်ဝင်မစွက်နဲ့ကြားလား။